Wasaaradda Qorsheynta Qaranka oo shirka wada-tashiga ku soo gabo gabeysay Baydhabo “SAWIRRO” | Radio Muqdisho
Wasaaradda Qorsheynta Qaranka oo shirka wada-tashiga ku soo gabo gabeysay Baydhabo “SAWIRRO”
Wasaaradda Qorsheynta Qaranka oo Magaalada Baydhabo ku soo gaba-gabeeysay Shirka wadatshiga qorshe howleedka Istaraatiijiyadda Xalka Waara ee dowlada gobaleedka Koonfur galbeed.
Wada-tashiga oo socday muddo shan cisho ah ayaa ujeeddadiisa ahaa diyaarinta qorshe howleedka Istaraatijiyada xalka waara ee dowlad gobaleedka Koonfur galbeed, iyadoo ay ka qeyb-galeen Wasaraadaha iyo hay’adaha ay quseeyso ee dowlad gobaleedkaasi oo gacan weyn ka geystay dar-dargelinta tallaabooyinka wax looga qabanayo mushaakilaadka kala duwan ee dabiiciga ah sida abaaraha, colaadaha iyo fatahaada.
Mustaf Cabdullaahi iyo Faadumo Cabdiraxman Cali oo ah xubnahii ka qeybgalay Watashiga ayaa ka warbxiyay waxyaabaha looga hadlay, waxa ay ka faa;iideystan dhankooda inta uu socday
“Waxaan wax weyn inaa helnay tabababar la xiirara wax uu yahay xalka waara iyo qaabka loo diyaariyo qorshe howleed uga dambayna wax weyn ku darsanay waxyaabaha mudnaanta u leh dowladd gobaleedka Koofuur galbeedka sidii wax looga qaban lahaa bulshada ku nugal ee xeryaha barakaca uu saameyay”.
Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Qorsheynta dowladd gobaleedka Koonfur galbeed Mudane Isaaq Maxamuud Mursal ayaa sheegay in uu aad uga faraxsanahay in howshan si wannaagsan kusoo dhamaatay ka maamul ahaana ay diyaar u yahiin dar-dargalinta qorshe howleedka Istaraajiyadda xalka waara kaas oo muhiim inoo ah.
Marwo Zahra Cabdi Maxamed ayaa faah-faahisay natiijada kasoo baxay wadatashiga maalmahan ka socday maamul gobaleedka Koonfur galbeed Soomaaliya.
“Waxaan ku guulaysanay in aan diyaarinoqorshe hawleed sanad ah oo wax looga qaban doono xaaladda Baraka ee dowlad goboleedka KoonfurGalbeed, ayadoo bulshadaas laga dhisayo dhinacyada nolol maalmeedka, u adkaysiga musiibooyinka,nolol iyo xirfadaha. Ka Wasaaradda Qorshaynta Qaranka ahaan waxaan ku dedaalaynaa sidii loo fulinlahaa qorshaha ay dejisteen maamulku looguna raadin lahaa kharashaadkii lagu fulin lahaa qorshaha” ayeey tiri Zahra Cabdi Maxamed.
Xafiiska Xalka waara ee Wasaaradda Qorsheynta Qaranka ayaa waxaa ka taageerayaa barnaamijkaan Urur gobaleedka IGAD-DRDIP iyo Baanka Adduunka (WorId Bank), Iyada oo gebagabadii shirka laga soo saaray qorshe howleedka sannadka 2021-2022 ee Istaraajiyadda Xalka Waara ee dowlad goboleedka koonfur galbeed oo noqayso dowladd gobaleedkii 4aad ee la diyaariyo qorshe howleedkan, kaas oo wax weyn ka tarayo in xal waara laga gaaro barkacan saameynta weyn ku leh dalkeenna si loo xaqiijiyo hurmaro waa wayn.